Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington Caawinta Guri la'aanta
Bogga ugu weyn|U adeegida Bulshooyinka|Caawinta Guri La'aanta
Ma gurila'aan baad tahay mise guri la'aan ayaad noqonaysaa? Halkan guji si aad uguhesho barnaamijka Gelitaanka Iskuxidhka Maxalliga ah taasi waxay kaa caawin kartaa inaad ka fikirto talaabooyinka xiga.
Fadlan booqo Bogga COVID-19 wixii ku saabsan caawinta COVID-19 macluumaad la xiriira.
Gargaarka Kirada Ka saarida
Waxaad ka heli kartaa liiska bixiyeyaasha adeegga xiriiriyeyaasha soo socda:
Guji Halkan Liiska Bixiyeyaasha Barnaamijka Kaalmada Kirada Ka -saaridda Degmada
Halkan Guji si aad u hesho Liiska Bixiyeyaasha Barnaamijka Caawinta Kirada Ka -saaridda Dadka Waaweyn iyo Dhallinyarada
Dhaqaalaha jira ma dabooli doono baahida loo qabo kaalmada.
Haddii aad la kulantid hoy la'aan, fadlan tag xiriirka ku yaal xagga sare ee boggan si aad u hesho macluumaad ku saabsan halka laga helo caawimaad.
Guri la'aanta Washington
Maxay hoy la'aantu u sii kordheysaa? Guri la'aanta ayaa kordhay tan iyo 2013 ee gobolka Washington sababo badan awgood, laakiin si weyn maxaa yeelay kirada sii kordheysa ayaa ku riixeysa dadka ku nool darfaha hoy la'aanta. Wax dheeri ah baro.
Guji xiriirinta soo socota si aad u daawato duubista bandhigga on "Wadayaasha Guri La'aanta ee gobolka Washington."
Tirooyinka Hoy La'aanta: Tirooyin kala duwan iyo waxa ay ka dhigan yihiin: Waxaa jira dhowr siyaabood oo kala duwan oo gobolka Washington uu u tirinayo tirada dadka aan guryaha lahayn iyo qoysaska sanad kasta. Waxaad wax badan ka baran kartaa warbixintan.
Guudmarka Nidaamka Guryeynta Hoylaaweedka iyo Maalgelinta: Degmo kasta oo ku taal Washington, shabakad gobolka oo dhan ka kooban oo ururo aan faa'iido doon ahayn ah ayaa waxaa ku jira in ka badan 98,000 oo qof oo soo foodsaarta hoy la'aan sannad kasta. Warqadan ayaa ku siin doona macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan nidaamkayaga hoy la'aanta ah.
Fahamka hoy la'aanta dhalinyarada: Wax ka baro ka hortagga guri la’aanta dhalinyarada dadaal.
Qorshaha Istiraatiijiyadeed ee Nidaamka Guri La'aanta Gobolka, Warbixinno Sannadle ah iyo Hantidhawr
Waxaad ka heli kartaa Qorshaha Istaraatiijiyadeed ee gobolka, warbixinnada sanadlaha ah, xisaab-celinta, iyo daabacadaha kale ee Ganacsiga ee la xiriira hoy la'aanta halkan.
Qorshayaasha 5-sano ee Dawladda Hoose iyo Warbixinnada Sannadlaha ah
Waxaad arki kartaa qorshooyinka 5-ta sano ee dowladda hoose halkan.
Wararka iyo ogeysiisyada
Gargaarka kirada cusub iyo cabbiraadaha waxqabadka nidaamka hoylaawe:
Ilaha maalgelinta gobolka ee cusub ayaa ahaa sharciga loo gudbiyay kadib kalfadhigii sharci dejinta ee 2021. Lacagtaani waxay ujeedadeedu tahay inay ka hortagto raritaanka iyadoo siineysa kheyraadka qoysaska ay u badan tahay inay noqdaan hoylaawe, la kulmaan cawaaqib caafimaad oo daran, ama labadaba, ka saaridda kadib. Intaa waxaa dheer, miisaaniyadu waxay mudnaanta siiyaan qoysaska si aan saamayn lahayn u saameeyay xaaladaha degdegga ah ee caafimaadka dadweynaha, hoy la'aanta, iyo degganaansho la'aanta guryaha.
dheeraad ah halkaan ka baro.
Washington Warbixin Caqabad 100-maalmood ah (PDF)
Xiriiriyaasha Guri La'aanta ee Degmada Dugsiga (shabakad)
Sanduuqa Amaanada Guryaha
Barnaamijyada Maalgelinta Mulkiilaha
Isku-darka Deeqaha Guri la'aanta
Deeqda Xalka Degdega ah (ESG)
Kaalmada kireysiga ee ku saleysan kirada (TBRA)
HUD Qaybta 811 Caawinta kirada
Barnaamijka Deganaanshaha Ardayda Guri La'aanta ah (HSSP)
Xafiiska Dhalinyarada Hoy La'aanta ah
Deeqda Barnaamijka Hoyga
Ka Hortagga Guri La'aanta Dhalinyarada
Barnaamijka Caawinta Kireynta Khasnada (T-RAP)
Xafiiska Qoyska iyo Dadka Waaweyn ee Hoy la'aanta ah
Xafiiska Qoyska iyo Dadka Waaweyn ee Hoy la'aanta ah (OFAH) wuxuu taageeraa nidaamyada ka jawaab celinta dhibaatooyinka guri la'aanta iyo hababka ugu wanaagsan ee si hufan u yareeya tirada dadka dibedda ku nool.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Xafiiska Qoyska iyo Dadka Waaweyn ee Hoy la'aanta ah
Xafiiska Guryeynta Taakuleynta
Xafiiska Caawinta Guriyeynta waxaa loo xilsaaray iskuxirka hay'adaha kale ee gobolka si loo ballaariyo helitaanka guryo taageero ah oo loogu talagalay dadka qaba xaaladaha caafimaadka maskaxda ama dhibaatooyinka isticmaalka maandooriyaha.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Xafiiska Guryeynta Taakuleynta
Habeen kasta, kumanaan dhalinyaro guri la 'ah oo ku nool Washington waxay seexdaan iyagoo aan haysan amni, xasillooni, iyo taageero qoys ama guri. Xafiiskeennu wuxuu hoggaamiyaa dadaallada gobolka oo dhan lagu yareynayo lagagana hortagayo hoy la'aanta dhalinyarada iyada oo loo marayo shan goobood oo muhiimad gaar ah leh.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Xafiiska Dhallinyarada Guri la'aanta ah
Waxqabadka Nidaamka Guri La'aanta
Warbixinnada Waxqabadka Nidaamka Guri La'aanta ee Gobolka Washington waxay bixiyaan macluumaad ku saabsan tallaabooyinka waxqabadka nidaamka hoylaaweyaasha ee muhiimka ah oo ay ku jiraan dhowr ka mid ah Tallaabooyinka Waxqabadka Nidaamka Guri La'aanta ee HEARTH. Warbixinta Waxqabadka Nidaamka Guri La'aanta ayaa sidoo kale bixisa macluumaad kale oo macno leh oo ku saabsan nidaamka ka jawaab celinta dhibaatada guri la'aanta bulshada.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Waxqabadka Nidaamka Guri La'aanta.
Nidaamyada Macluumaadka Maareynta Hoyga (HMIS)
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan HMIS.
Bar-tilmaameedka Waqtiga Tirada
The Sharciga Guri la'aanta iyo Gargaarka waxay u baahan tahay degmo kasta inay sameyso sahan hal maalin ah oo hal maalin ah oo ku saabsan dadka aan haysan guri joogto ah - labadaba kuwa la dajiyay iyo kuwa aan la degganeyn. Barta 2021 ee waqtiga tirinta (PIT) waxay dhici doontaa Janaayo 28, 2021.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Barta waqtiga.
Sii wadida daryeelka
Sii-wadida Daryeelka waa Waaxda Mareykanka ee Guriyeynta iyo Horumarinta Magaalooyinka (HUD) Barnaamijka si kor loogu qaado ballanqaadka bulshada oo dhan iyo taageerada lagu joojinayo hoy la'aanta. Waxay siisaa deeqo hay'adaha aan macaash doonka ahayn, gobolka iyo dawladaha hoose iyada oo loo marayo tartan sanadle ah. Ganacsigu wuxuu lashaqeeyaa 34 degmo oo kujira Isudheellitirka Gudiga Hogaaminta Hoylaawayaasha Daryeelka Guri La'aanta Gobolka Washington, si loo soo gudbiyo dalab iskujira oo maalgelin ah.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Sii-wadida Daryeelka.
Tababbarka Deeqaha Adeegyada Guri La'aanta
Ganacsiga deeqaha hoy la'aantu waxay u baahan tahay bixiyeyaasha adeegga inay muujiyaan karti iyo sinnaan xagga dhaqannada ugu wanaagsan. Hadafkeenu waa in tababaradaani ay ku diyaariyaan deeq bixiyeyaasha aqoonta iyo aaladaha loo baahan yahay si loogu kobciyo adkeysiga shaqsi, barnaamij iyo heer hay'ad, iyadoo la xoojinayo jawaabta beeshooda ee hoy la'aantu.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan tababarka Deeqaha Adeegga Hoyga